नमस्ते लो ब्लेक
ब्लेक आफ्नो नियमित खेल एक नयाँ मोड मा ल्याउन नमस्ते लो ब्लेक. यस add-मा सुविधा तपाईं बिक्रेता द्वारा सम्हाल्न गर्न दोस्रो कार्डको मूल्य मा शर्त दिन्छ. के यो एक उच्च मूल्य वा पहिलो कार्ड को कम मूल्य को हुन त शर्त सक्छ. जबकि यो वास्तविक खेल प्रभाव छैन, यसलाई आफ्नो winnings मा भन्छन् र साथै गेम RTP मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ.
नमस्ते लो ब्लेक को विकासकर्ता बारे
NYX-यथार्थवादी द्वारा विकसित, नमस्ते लो ब्लेक दुई खेल विकास कम्पनीहरु को साझेदारी को परिणाम हो. यो जोडी फेब्रुअरी सँगै आए 2015 र तब देखि सबै भन्दा राम्रो मोबाइल क्यासिनो खेल बाहिर दिने गरिएको छ.
नमस्ते लो ब्लेक एक स्वागत ब्लेक आफ्नो सामान्य खेल छ. यस बारेमा जटिल केही छ थप्न-मा. यो नमस्ते लो शर्त सुविधा बस खेल रमाइलो भन्छन्. कार्ड को सामान्य छ डेक र बाजी संग, खेल तपाईंलाई थाहा थियो रूपमा जान्छ. तपाईं राख्न चाहनुहुन्छ शर्त को मूल्य आधारमा चिप्स चयन, र पनि बाजी तिमी खेल्न इच्छा. एक पटक गरेको, खेल सुरु गर्न सम्झौता बटन मारा.
नमस्ते लो तपाईं ब्लेक समयमा प्ले बाजी को छ. यहाँ, पहिलो कार्ड तालिका मा राखिएको गरेपछि प्लेयर बिक्रेता द्वारा आएको गरिने दोस्रो कार्डको मूल्य मा शर्त मौका पाउने. अब, प्लेयर या त उच्च वा कम चयन गर्न छ, छ, तपाईं दोश्रो कार्ड पहिलो कार्ड भन्दा एक उच्च वा कम मूल्य को हुनेछ कि अनुमान छ. तपाईं सही अनुमान भने, त तपाईं यसलाई तुरुन्तै भुक्तानी प्राप्त. अन्य विजेता परिदृश्य हुँदा कुल 21 दोस्रो कार्ड नै हासिल छ. पहिलो कार्ड एक ऐस थियो भने एक धक्का हुन्छ, र दोस्रो पनि एक ऐस जस्तो देखिन्छ. प्लेयर पहिलो छैन, जबकि दोस्रो कार्ड एक ऐस छ यदि शर्त गुमाउनु हुनेछ, वा अनुमान गलत छ भने.
एक पटक नमस्कार लो शर्त माथि छ, ब्लेक को नियमित खेल पुनः सुरु. को कुल रही 21 वा यसलाई नजिक खेलको उद्देश्य छ.
को RTP संग 99.92%, नमस्ते लो ब्लेक नियमित ब्लेक को एउटा अचम्मको संस्करण हो. तपाईं आफ्नो मनपर्ने क्यासिनो खेल मा केही थप रमाइलो लागि देख रहे भने, त्यसपछि यो लगानी गर्न सही खेल हो.